पाथीभरामाइले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशीफल « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मेषः– बाह्य कुरा भन्दा आन्तरिक कुरालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु होला । अरुको पूर्ण भरोसामा काम नगर्नु होला । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ । आफन्तको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढि उपलब्धि कम हुनेछ । पढाईमा कम ध्यान जानेछ ।
वृषः– सहज तरिकाले कुनै काम हुने छैनन । उपलब्धि विहिन काममा समय बढि खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित प्रतिफल मिल्ने छैन । लगनशिल भई गरेका केहि कामले अन्तिम रुप लिनेछ । आत्म विश्वासको कमि हुनेछ । सफल यात्राको सम्भावना देखिन्छ । आफन्तले पराईको व्यवहार गर्नेछन् । साँझपख केहि काम हुनेछन् ।
मिथुनः– काम गर्ने बातावरण भत्किनेछ । उपलब्धिको संरक्षण गर्न गाह्रो हुनेछ । आफन्त सँग विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । लगनाी अनुसारको व्यापार व्यवसायबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन । आम्दानीका मार्ग बन्द एवं खर्चका मार्ग बढि खुला हुनेछन् । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । उधारो कारोवार नगर्नु होला ।
कन्याः– हेलचक्र्याई गर्दा आएको अवसर गुम्नेछ । सोच विचार अगाडि बढ्नु होला इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउने काम हुनसक्छ । राजनीति औजारमा खिया लाग्ने देखिन्छ । उपलब्धिका काममा बाह्य तत्व हावी हुने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । देखिएका सम्भावना क्षिण भएर जानेछन् । काम गर्नलार्ई स्वास्थ्यले पनि कम साथ दिनेछ ।
तुलाः– काम गर्ने वातावरण विग्रिनेछ । उपलब्धिका काममा ढिला सुस्ति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । विपरित लिङ्गिबाट सहयोग मिल्नेछ । घरका समस्या समाधान गर्न गाह्रो गाह्रो हुनेछ । मालसमान हराउन वा चोरी हुनसक्छ सचेत हुनुहोला । साँझपख समयमा सामान्य सुधार आउनेछ ।
वृश्चिकः– सवैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दा राम्रै हुनेछ । काम गर्दा साथी भाईको सहयोग पाईनेछ । संघर्षबाट सफलताको शिखर चढ्न पाईनेछ । परिश्रमको अन्तिम परिणाम सुखद रहनेछ । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । काममा ढिला सुस्ति भने पटक्कै नगर्नु होला ।
मकरः– कामको विचमा विचार परिवर्तन नगर्नु होला लक्ष्यमा पुग्न सकिने छैन । पारिवारिक खर्च बृद्धि हुन सक्छ । काम गर्ने जोश जागर घट्ने छैन । जीवन साथीको सहयोग लिएर काम गर्दा सजिलो हुनेछ । आर्थिक लगानीमा धेरै जोड नदिनु होला । इच्छा र आकाँक्षा केहि पुरा हुनेछन् । मिलेर गरेका कामबाट कम उपलब्धि हुनेछ ।
कुम्भः– मित्रहरु टाढा हुनेछन् भने दुर्जनहरु नजिक आउने छन् । धेरै विश्वास गर्दा आशा निराशामा परिणत हुनसक्छ । व्यापार व्यवसायमा देखिएका सम्भावना क्षीण भएर जानेछन् । राजनीति व्यक्तिको धेरै भर नपर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा ध्यान दिनुहोला । जोखिम मोलेर काम गर्दा नोक्सान धेरै हुनेछ । साँझपख समयमा सुधार आउनेछ ।
मिनः– समयको सदुपयोग गर्न पछि नपर्नु होला । आफ्नै प्रयास र प्रयत्नबाट धेरै काम बन्ने छन् । अरुको भरमा काम नगर्नु होला उपलब्धि कम हात लाग्नेछ । पढाई लेखाईमा भन्दा आर्थिक कार्यमा बढि दखल हुनेछ । कामको विचमा विचार परिवर्तन गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुनेछैन । धन लगानी भन्दा श्रममा जोड दिनुहोला । साँभपख खर्च विवाद बढ्न सक्छ ।
(राशिफलमा जे जस्तो भए पनि सवैको दिन सुखमय रहोस् । ईश्वर दाहिना हुन । भगवानले रक्षा गरुन । ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति ! ! ॐ शान्ति ! ! ! श्रीकुृष्णार्पणास्तु ) नोटः–यो राशि,पञ्चाङ्ग आदि नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो –पंडित श्रीकण्ठ सुराचार्य ।
मनकामनामाईले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस् तपाईको आजको राशिफल
Current Openings at OS Nepal Inc.
EMPLOYER: OS Nepal, Inc. POSITION TITLE: Editor POSITION DUTIES: OS Nepal Inc. has an opening